Indlu yakho yeNtuthuzelo kwiNtliziyo yeDilijan ❤︎
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguArgisht
Wamkelekile kwisixeko saseDilijan!
Apha uya kufumana umoya ococekileyo ngokugqibeleleyo, indalo entle, kunye nokuhlala okumnandi.
Amafulethi eComfort House abekwe embindini weDilijan kwindawo edumileyo. Babekwe kwisakhiwo esitsha esithandekayo esinemigangatho esi-9, ethathwa njengenye yezona zibalaseleyo esixekweni. Inika indawo yokupaka yabucala kwisiza kunye neWiFi yasimahla. Kukho ibala lokudlala eligqwesileyo labantwana. Ukukhuseleka kwakho, isakhiwo sinokhuseleko lwe-clock-clock kunye nokuhlolwa kwevidiyo.
Le ndlu inegumbi elinye lokulala, iTV enescreen esisicaba, ikhitshi elixhotyiswe ngemicrowave nefriji, umatshini wokuhlamba impahla, negumbi lokuhlambela elinye elineshawari. Indlu ibekwe kumgangatho we-9, kwaye i-balcony inika umbono omhle wepaki yesixeko kunye nomlambo we-Aghsteva.
IDilijan yidolophu ekuchithelwa kuyo iiholide kunye noluntu lwasezidolophini kummandla waseTavush eArmenia. Idla ngokubizwa ngokuba ngabantu balapha njenge-Armenian Switzerland okanye iSwitzerland encinci, yenye yezona ndawo zibalulekileyo zokuchithela iiholide eArmenia, ekwiDilijan National Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Argisht
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dilijan